Inona no Atao Raha Misy Mahasorena any Am-pianarana? | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Serba (Sirilika) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina
“Mbola misy zavatra mampiferinaina anao foana any am-pianarana na dia efa lehibe aza ianao. Ny antony mahatonga an’ilay izy fotsiny no miova.”—James, Nouvelle-Zélande.
“Be loatra ny zavatra nahasorena ahy tany am-pianarana, ka sady te hitomany aho no te hivazavaza.”—Sharon, Etazonia. *
TOA tsy tsapan’ny ray aman-dreninao mihitsy ve fa mafy ny mahazo anao any am-pianarana? Mety hiteny ry zareo fa ny azy no mafy kokoa satria tsy maintsy mandoa trosa izy, mitady vola, na mampifaly ny mpampiasa azy. Ianao anefa mahita hoe samy miferinaina ianareo. Ny anao aza angamba mbola mafy kokoa.
Na ny mandeha mianatra fotsiny aza dia efa mampiferinaina. Hoy i Tanya, any Etazonia: “Matetika no misy ankizy miady ao anatin’ilay bisy mpitondra anay. Asain’ilay mpamily midina daholo àry izahay, ka lasa tara antsasak’adiny na mahery.”
Tsy sorena intsony ve ianao rehefa tonga any am-pianarana? Mbola sorena ihany ianao matetika! Mitovy amin’ireto angamba ny mahazo anao.
Sorena amin’ny ataon’ny mpampianatra.
“Tian’ny mpampianatra anay hahazo ny naoty farany ambony aho. Voatery miezaka mafy àry aho, amin’izay mba faly ry zareo.”—Sandra, Fidji.
“Raha vao hitan’ny mpampianatra hoe mahay ianao, dia ampirisihiny hahazo naoty tsara. Tena tereny mihitsy ianao.”—April, Etazonia.
“Ambanin’ny mpampianatra sasany ianao raha vao tsy araka ny eritreretiny ny tanjonao, na dia tsara aza ilay izy.”—Naomi, Etazonia.
Manao zavatra mahasorena anao koa ve ny mpampianatra anao? Inona no vokany eo aminao?
Sorena amin’ny ataon’ny mpiara-mianatra.
“Sahy kokoa manao izay tiany ny ankizy any amin’ny lise, sady vao mainka mikomy. Tsy tiany ianao raha vao tsy manao hoatr’azy.”—Kevin, Etazonia.
“Ampirisihin’ny ankizy hisotro toaka sy hanao firaisana foana aho isan’andro. Sarotra indraindray ny mandà.”—Aaron, Nouvelle-Zélande.
“Ampirisihin’ny ankizy hampiaraka aho, nefa vao 12 taona. Tena mahasosotra ilay izy! Tsy maintsy misy miteny foana hoe: ‘Rahoviana ihany ianao ity vao hanao sipa e?’ ”—Alexandria, Etazonia.
“Nampirisihin’ny ankizy hiaraka tamin’izay ankizilahy izay aho. Tsy nanaiky aho, ka nataon-dry zareo hoe vehivavy miray amin’ny vehivavy. Vao folo taona anefa aho tamin’izay!”—Christa, Aostralia.
Manao zavatra mahasorena anao koa ve ny mpiara-mianatra aminao? Inona no vokany eo aminao?
Matahotra hoe inona no hataon’ny ankizy raha fantany ny fivavahanao.
“Sarotra ny miresaka momba ny fivavahanao amin’ny mpiara-mianatra, satria tsy hainao izay hataony avy eo. Matahotra ianao sao hoeritreretiny hoe ankizy hafahafa.”—Carol, Hawaii.
‘Lasa tia mifoka rongony sy manao firaisana ary misotro toaka ny ankizy manomboka eo amin’ny kilasy fahenina. Mandreraka be ilay izy. Matahotra mantsy ianao sao hihomehezany, satria tsy manao hoatr’azy fa mankatò ny fitsipiky ny Baiboly.’—Susan, Etazonia.
Izany koa ve no mahazo anao? Inona no vokany eo aminao?
Ireto misy zavatra hafa mahasorena.
Asio marika izay tena mahakasika anao. Raha hafa ilay izy, dia soraty eo amin’ny farany.
Efa akaiky ny fanadinana
Tsy maintsy manao devoara
Manantena anao hahavita zavatra tsara be ny ray aman-dreninao
Ianao mihitsy no manantena hahavita zavatra tsara be
Misy mampijaly na manadala foana ianao
Soso-kevitra dimy hanampy anao tsy ho sorena loatra
Tadidio fa tsy maintsy hisy zavatra hahasorena foana any am-pianarana. Marina fa mety ho kivy ianao raha sorena be loatra. Hoy i Solomona mpanjaka hendry: ‘Mahakivy ny fahoriam-po.’ (Ohabolana 15:13) Aza mora kivy anefa. Misy zavatra azonao atao tsara mantsy.
Toy ny olona mibata fonjam-by ianao rehefa miezaka tsy ho sorena loatra. Raha hainao tsara ny mizaka an’ilay izy, dia vao mainka ianao hatanjaka
Ataovy toy ny hoe olona mibata fonjam-by ianao. Tsy maintsy manao fanazaran-tena tsara ny olona mibata fonjam-by raha te handresy. Ianarany ny fomba fibatana an’ilay izy, ary tsy mibata fonjam-by mavesatra loatra aminy izy. Hihamatanjaka ny hozany amin’izay. Raha tsy izany kosa, dia mety ho rovitra ny hozany, na ho tapaka mihitsy aza ny taolany.
Misy zavatra azonao atao koa rehefa sorena be ianao. Marina fa mety havesatra aminao ny mahazo anao, nefa raha hainao ny mizaka azy, dia tsy hisy vokany ratsy eo aminao ilay izy, ary ho vitanao tsara izay tokony hataonao. Araho àry ireto:
Fantaro ny tena antony mahasorena anao. Hoy ny ohabolana iray: “Malina izay mahatsinjo ny loza ka miafina.” (Ohabolana 22:3) Kivy be àry ve ianao satria sorena? Tsy afaka ny hiafina na hampihena ny fahasorenanao anefa ianao, raha tsy fantarinao aloha ny tena antony mahatonga ilay izy. Jereo indray àry izao ny zavatra nosoratanao tetsy aloha. Inona no tena mahasorena anao?
Manaova fikarohana. Miferinaina ve, ohatra, ianao fa be devoara loatra? Jereo àry ny soso-kevitra ao amin’ny Mifohaza! 8 Febroary 2004, ao amin’ilay lahatsoratra “Manontany ny Tanora Hoe... Ahoana no Ahitako Fotoana Hamitana ny Entimodiko?” Ampirisihin’ny ankizy hanao firaisana ve ianao? Misy torohevitra tsara ao amin’ny Mifohaza! Martsa 2007, ao amin’ilay lahatsoratra “Manontany ny Tanora Hoe... Ahoana Raha Misy Manasa Ahy Hanao Firaisana?”
Eritrereto mialoha izay holazainao. Matahotra ve ianao hoe inona no hataon’ny mpiara-mianatra aminao raha fantany ny fivavahanao? Aza miandry azy hanontany vao mieritreritra izay hotenenina na hatao. (Ohabolana 29:25) Hoy i Kelsey, 18 taona: “Nomaniko mialoha izay holazaiko. Izany no nanampy ahy. Noeritreretiko hoe ahoana no hanazavako ny zavatra inoako.” Izany koa no nataon’i Aaron, 18 taona, any Belzika. Hoy izy: “Noeritreretiko mialoha ny fanontaniana mety hapetrany sy izay havaliko azy. Tsy ho sahy niresaka ny zavatra inoako aho, raha tsy izany.”
Aza mangataka andro. Tsy hilamina mihitsy ny olana raha avela amin’izao. Mihasarotra kosa ilay izy, ka vao mainka mahasorena. Vavolombelon’i Jehovah àry ve ianao? Lazao avy hatrany izany. Tena ho voaro ianao amin’izay. Hoy i Michèle, 20 taona: “Vao nanomboka ny taom-pianarana, dia nitady zavatra horesahina aho, mba hahafahako hanazava ny fitsipiky ny Baiboly arahiko. Hitako mantsy tamin’izany, fa lasa tsy sahy niteny intsony aho hoe Vavolombelona, raha vao niandriandry. Tena voaro aho nandritra ny taom-pianarana, rehefa niresaka ny fitsipika arahiko sy niezaka nankatò izany.”
Mangataha torohevitra. Voafetra ihany ny herin’ny mpibata fonjam-by. Misy zavatra tsy zakany, na matanjaka be aza izy. Tsy zakanao koa angamba ny mahazo anao, nefa tsy voatery hiady irery ianao. (Galatianina 6:2) Nahoana raha miresaka amin’ny ray aman-dreninao na Kristianina matotra hafa? Asehoy azy izay nosoratanao tetsy aloha. Anontanio izy hoe inona no azonao atao mba tsy ho sorena loatra ianao. Diniho ny nataon’i Liz, any Irlandy. Nolazainy tamin’ny dadany fa natahotra ny hihomehezan’ny ankizy izy, noho ny zavatra inoany. Hoy i Liz: “Niara-nivavaka izahay sy dadanay isan’andro, rehefa nanatitra ahy tany am-pianarana izy. Tsy dia natahotra intsony aho avy eo.”
Misy mahatsara azy
Misy mahatsara azy ny miferinaina, na dia sarotra inoana aza izany. Nahoana? Mety hidika ilay izy fa te hanao zavatra tsara ianao. Mbola miasa tsara koa ny feon’ny fieritreretanao. Hoy kosa ny Baiboly momba ny olona tsy mivaky loha mihitsy: “Mandra-pahoviana ianao, ry ilay kamo, no mbola hatory? Rahoviana ianao no hifoha amin’ny torimasonao? Mbola hatory kely ihany, mbola ho rendremana kely ihany, ary mbola hamoritra tanana ihany ka hatory kely, dia ho avy tampoka sahala amin’ny mpandroba ny fahantranao, ary ho sahala amin’ny lehilahy mirongo fiadiana ny tsy fahampiana hanjo anao.”—Ohabolana 6:9-11.
Hoy i Heidi, 16 taona: “Mahasorena be ny any am-pianarana, nefa mitovy amin’izany ihany ny hahazo anao rehefa hiasa ianao any aoriana any.” Marina fa mafy ny mahazo anao rehefa sorena ianao. Raha hainao anefa ny manamaivana an’ilay izy, dia tsy hisy vokany ratsy eo aminao izy io. Handray soa kosa ianao, satria hahay kokoa hiatrika ny fiainana.
Ahoana no ahafantarana fa sorena ianao?
Vao mainka ianao ho sorena, raha sarotsarotiny loatra ary mitady hanao zavatra tsara be foana. Nahoana?
Iza no azonao iresahana raha sorena be loatra ianao?
Afaka mandray soa amin’ny fianarana ianao. Misy fomba dimy hanampy anao ato.
Misy zavatra efatra azonao atao ato, raha sendra misy ankizy mitarika anao haditra.
Hizara Hizara Inona no Hataoko Rehefa Misy Zavatra Mahasorena any Am-pianarana?